နိုင်ငံရေး 150 views
ပြည်သူ့နီတိ (Civic Education)
“Civic education inademocratic society most assuredly needs to be concerned with promoting understanding of the ideals of democracy andareasoned commitment to the values and principles of democracy.”
အထက်ပါယူဆချက်ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်တစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရေး Civic Education ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို အထိမိဆုံး ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ Civic Education ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို နားလည်သဘောပေါက်မှု မြင့်မားရေးအတွက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ တန်ဖိုးများနဲ့ စည်းမျဉ်းများကို အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်စွာနဲ့ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြရေး ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်အတွက် သေချာပေါက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
“အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်စွာ” ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို အထူးသဖြင့် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသဘောတရားများကို စနစ်တကျ သိရှိနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးကြတဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသိပညာအဆင့်အတန်းဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမှု မရှိနိုင်သေးတာကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒီမိုကရေစီကို “အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်စွာ” ကျင့်ကြံဖို့၊ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ ပြောဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသိပညာ ရေချိန်မြင့်မားမှသာ ဒီမိုကရေစီသည် အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်စွာ ဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ သဘောရှိတာကြောင့် တခြားကိစ္စရပ်များ (တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အခြေခံဥပဒေ၊ စီးပွားရေး စသည်) ကို ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ Civic Education ကိုလည်း မဖြစ်မနေ အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ကြမှသာ လိုရာခရီးကို ပေါက်မြောက်ရောက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Civic Education နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထက် concept တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။
“Sharing is essential inademocratic society-the sharing of power, of resources, and of responsibilities. Inademocratic society the possibility of effecting social change is ever present, if citizens have the knowledge, the skills and the will to bring it about. That knowledge, those skills and the will or necessary traits of private and public character are the products ofagood civic education.”
ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်တစ်ရပ်မှာ မျှဝေခြင်း (Sharing) က အရေးပါတဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အရင်းအမြစ်များနဲ့ တာဝန်ယူမှုတို့ကို မျှဝေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတို့ဟာ အသိပညာနဲ့ ပြည့်စုံမယ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု (Skill) တွေလည်း ရှိမယ်၊ စိတ်ဆန္ဒများလည်း ရှိမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်တစ်ရပ်မှာ လူမှုဘဝပြောင်းလဲရေးဟာ အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အဲဒီအသိပညာများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ စိတ်ဆန္ဒများ (သို့တည်းမဟုတ်) တစ်သီးပုဂ္ဂလဘဝနဲ့ အများနဲ့သက်ဆိုင်သော စရိုက်လက္ခဏာများမှာ လိုအပ်တဲ့ ပြုမူပြောဆို လုပ်ကိုင်ပုံနည်းလမ်းများကို ကောင်းမွန်တဲ့ Civic Education ကနေ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Civic Education ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်လေ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် အဆင့်မြင့်ရေး သေချာလေဆိုတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Civic Education နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်နေပြီးတော့ သူနဲ့ ထပ်တူအရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်ကတော့ HRD ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားဘယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပဲ ကျင့်သုံးကျင့်သုံး HRD ကို အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ခိုင်မာတောင့်တင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောရေးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားရေးတို့အတွက် ဘာမှ စိုးရမ်ပူပန်နေစရာမလိုလှပါဘူး။ တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း HRD ကို မျက်ကွယ်ပြုထားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် အချိန်မရွေး ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုဖို့ပါ။
HRD ဆိုတာက အလုံးစုံပြည့်ဝပြည့်စုံသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးအတွက် အာမခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူ့စွမ်းအားရင်းမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်မားလေ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလေ အနာဂတ်သည်လည်း ခိုင်မာလေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို တည်ဆောက်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ Institution များကို မောင်းနှင်ကြသူများအားလုံးသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အုပ်ချုပ်သူများနဲ့ ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးသူများအားလုံးသည် နိုင်ငံသားများဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းရည်နိမ့်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေသေးရင်တော့ နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ဖျက်ဆီးသူများပင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ စွမ်းရည်သည် ဒီမိုကရေစီကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်လိုက်ရုံ ကျင့်သုံးလိုက်ရုံနဲ့ မြင့်တက်ကောင်းမွန်လာမယ်မဟုတ်ပါ။
စွမ်းရည်မြင့် နိုင်ငံသားများဖြစ်လာနိုင်ရေးအတွက် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ (Institutions) များက စွမ်းရည်မြင့်နိုင်ငံသားများ ပေါ်ထွန်းလာရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးဖို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး (State Building)
State Building ဆိုတာကို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟာ Civic Education eJY HRD ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအပေါ် လုံးလုံးမူတည်နေပါတယ်။ နေ့ချင်းညချင်း နိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ်များနဲ့ချီပြီး အပြင်းအထန် တည်ဆောက်ရသော လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ဘက်စုံစွမ်းရည်မြင့်မားရေး၊ အသိပညာမြင့်မားရေးနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဝ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သက်ဆိုင်သောဘဝများအပေါ် သဘောထားမှန်ကန်စွာ ထားရှိနိုင်ရေး စတာတွေကို ဒီမိုကရေစီရဲ့ ရေခံမြေခံကောင်းများလို့ပြောရင် မမှားလောက်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားတို့ စွမ်းရည်မြင့်မားမှသာ နိုင်ငံရေးရေခံမြေခံကောင်းကို မျှော်လင့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
ရေခံမြေခံကောင်းကို မတည်ဆောက်မဖန်တီးနိုင်ရင် ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာ နိုင်ငံတစ်ခုကို ကြိုးစားတည်ဆောက်နေရင်သော်မှ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်နေပါလိမ့်ဦးမယ်။